New York ကယနေ့တွင်: N.Y. ယနေ့တွင်: présidencမှနယူးယော့
New York ကယနေ့တွင်
ရာသီဥတု: သင်ကဆီးနှင်းသတိရ? ဝက်ခြေလျင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မတိုင်မီကျကတညျးကလက်တွေ့ကျကျရှိခဲ့. ယနေ့ည, တစ်လက်မသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဆုံးကြလိမ့်မည် , မှ 10 နာရီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်.
ယခုတိုင်အောင်: မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးနှင့် အများဆုံး 31 . မနက်ဖြန်မိုဃ်းပွင့်ညျပျြော. စနေနေ့ညဥ့်, အနည်းငယ်လက်မပိုရှည်ကျဆုံးခြင်း.
အခြားရွေးချယ်စရာယာဉ်ရပ်နား : အကျိုးသက်ရောက်မှုယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်အတွက်, တနင်္လာနေ့ဆိုင်းငံ့.
Troy အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလမ်းကြောင်းအပေါ် Kirsten Gillibrand, နယူးယော့, ဒီမှာ. အကြွေး Drew အမျက်ဒေါသ / Getty Images
ဤသည်နယူးယော့သင်၏နောက်သမ္မတဖြစ်နိုင်သည်. သို့မဟုတ် ဒီတစ်ခု . သို့မဟုတ် ဒီတစ်ခု . သို့မဟုတ်ပင် ဒီတစ်ခု .
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Kirsten Gillibrand သည်မိမိ Re-ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းကဆိုပါတယ်ပြီးမှရှစ်ဆယ်-နှစ်ရက်: « ငါ "ခြောက်နှစ်ငါ၏သက်တမ်းအစေခံပါလိမ့်မယ် , သူမကြောင့်သမ္မတအဘို့၌ရပ်နေကြ၏စတီဖင် Colbert ပြောသည်.
Mme Gillibrand, အဟောင်းကို 52 နှစ်ပေါင်း, တစ်ဦး သူမအထဲသို့ပြေး ဝင်. ဆိုပါတယ် "သောကြောင့်, လူငယ်တစ်ဦး mom, အဖြစ်, ငါကအခြားလူရဲ့သားသမီးတို့အဘို့စစ်တိုက်ပါမည်ဟု, ငါ "ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘို့စစ်တိုက်မယ်လို့ကဲ့သို့ကျယ်လောင်သော.
Cela fait d’elle la première New-Yorkaise – sans compter Donald Trump – à prendre part à la course. သို့သော်ကနောက်ဆုံးမကျမည်အကြောင်း.
မိုက်ကယ် R ကို. ဘလွန်းဘာ့ဂ်ထားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစဉ်းစား. ဘီလ်က de Blasio ထုတ်ပယ်ရန်ငြင်းဆန်. (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Cuomo တစ်ပြေးထွက်အုပ်ချုပ်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်အိမ်တံခါးပိတ်ထားသောမဟုတ်ကြောင်းထင်မြင်ပေးရ likes ။)
အဆိုပါ Hudson ၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, အထက်လွှတ်တော်အမတ် Cory Booker နယူးဂျာစီကိုလည်း ဝင်. အသင့်တယ်.
အကြွေး The New York Times များအတွက်ဂျက်စီကာ Ball ကို
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Ridgewood အကြံပေးအဖွဲ့: ပြည်နယ်ရေချို Class ကိုငါတစ် Wetlands အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါသည်. [ မိဖုရားပြန်တမ်း ]
အရှေ့ Hampton ပူဖောင်းများများ၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြန့်ချိတားမြစ်စေခြင်းငှါ: ဘီလ်ကိုလည်းရေပူဖောင်းများကိုဖုံးလွှမ်း. [ Newsday ]
Cecil Richards, စီစဉ်ထားမိဘနှင့် "Trouble Make" ၏စာရေးဆရာများ၏သမ္မတဟောင်း, Prabal Gurung ရွာ၌ပြောတတ် . 18 နာရီ [15 $]
အဆိုပါပြဇာတ် "နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောငျကွ! Naija အမျိုးသမီးများနေ့ Talk ကိုစစ်မှန်သော» du အာဖရိကမြစင်တာ နိုင်ဂျီးရီးယားအမျိုးသမီးများဘဝစူးစမ်းဖို့သီချင်းနှင့်အကအခုန်ကိုအသုံးပြုသည်. 19 နာရီ [13 $]
တစ်ခုကနေ့လယ်လက်ဖက်ရည်နှင့်ဘီစကွတ် (အဆင်ပြေလား, တစ်ဦးဘီစကစ်မုန့်) ယင်းမှ Seward Park ကစာကြည့်တိုက် အောက်ပိုင်းအရှေ့ဘေးထွက်. 14h15 [အခမဲ့]
အဆိုပါတေးရေးဆရာနဲ့တယောဂျက်စီကာအဲဒီ့တစ်ဦးတပ်ဆင်ခအပေါ်တုံ့ပြန်သည့်အပိုင်းအစအနက်ဖွင့် အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်းပြတိုက် au . 18H30 [သငျသညျလိုချင်တာတွေပေးဆောင်]
ဖြစ်ရပ်များပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ်များမှာ, ဒါကြောင့်မထွက်ခွာမီသတိထားပါ. ပိုများသောဖြစ်ရပ်များ, ကြည့်ရှုခြင်း လမ်းပြ ၏ အကျိုးရလဒ်များ ယဉ်ကျေးမှုစာမျက်နှာများတွင် Times သတင်းစာ.
နှင့်နောက်ဆုံးတွင်: သင်မသိသောလျှင်, maintenant vous savez – c’est le jour de la patate douce
Asams Yams. အကြွေး The New York Times များအတွက်ချဒ် Batka
ဒါဟာ Yams နေ့အဖြစ်လူသိများသည့်တရားမဝင်အားလပ်ရက်တစ်ဘရွတ်ကလင်းကြယ်ဖြစ်ရပ်နှင့်အတူယနေ့ကျင်းပစေခြင်းဖြစ်ကောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်.
အားလုံးအပြီး, ဒါကခရိုင်ဘို့မိမိတို့မာနထောင်လွှားမာနထောင်လွှားနေသောလူတွေကိုမူလနေရာဖြစ်သည် ကော့တေး beet ဖျော်ရည် , ၏ ပြသနာတွေကော်ဖီ CBD နှင့် အဆိုပါကလေးစက်ရုံ .
သို့သော် Yams နေ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်.
ဤကိစ္စတွင်အတွက် Yams များမှာ ASAP Yams , အဆိုပါ Bronx သူတစ်ဦးက အုပ်စုတစုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု အဆိုတော်များ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ.
Yams, အဘယ်သူ၏အမည်ရင်းစတီဗင် Rodriguez, ဖြစ် သူလေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသေဆုံးခဲ့ တစ်ဦး ဆေးအတိုက်လွန်း . သူရှိခဲ့ 26 နှစ်ပေါင်း.
ဒီညရဲ့ Barclays Center မှာဖြစ်ပါတယ် နှင့်ဤ ASAP ကျောက်, အဘယ်သူ၏ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ် Harlem ၏ဇာတိ 2013 ယင်းရပ်တည်မှုကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်, Yams မှတဆင့်; ASAP Ferg; နှင်းလျှောစီးသည့်အခုထက်ဘုရား Goggles; နှင့်အခြား.
ပိုကောင်း Yams တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်သူထိုကဲ့သို့သောအများပြည်သူမှုတ်သွင်းဖို့, တစ်ယူ မျက်စိပရိုဖိုင်းကို 2013 Jon Caraman , Yams ကျောက် ASAP Skywalker မှ Yoda အဖြစ်သူ့ဟာသူဖော်ပြထားတယ်သော.
M က. Yams Caramanica တဲ့ "ဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းညွှန်အဖြစ်ဖော်ပြ, တစ်မူဆယ်, ကွန်ဆာဗေးတစ် Sonic စိတ်ကူးများ ". သူကဂီတကိုကစားမခံခဲ့ရခြင်းနှင့် rhythm တွေကဖန်တီးခဲ့ပါဘူးရင်တောင်, Yams တစ်အရသာဒီဇိုင်နာတစ်ဦးပါရမီပန်းချီဆရာခဲ့သည်. ASAP ကျောက်အတူလုပ်ကိုင်ပြီးနောက်, M က. Caramanica ရေးသားခဲ့သည်: "Yams သည့်ရက်ပ် built, နှင့်အများပြည်သူ ".
မြို့ပြသတင်းစာ: Helene Hanff အစည်းအဝေး
ကျဆုံးမှာတော့ 1996, ငါ့အမိနယူးယောက်၌ငါ့ကိုလည်ပတ်ခဲ့. ငါ့အကြိုက်ဆုံးနေရာသူမ၏ယူအပြင်, ကျွန်မအံ့သြစရာစီစဉ်ထား: ဖြည့်ဆည်းဖို့အလည်အပတ်ခရီး Helene Hanff , 84 "၏ရေးသားသူ, Charing Cross Road », ငါ့အမိ၏စာအုပ်များ၏အနှစ်သက်ဆုံး.
အမှန်စင်စစ်, ဒါကြောင့်လည်းငါ့အဘို့အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်. ချထားသော, စိတ်ကူးအိုင်ဒီယာစဉ်းစားပြီးနောက်, ကျွန်မဖုန်းကိုစာအုပ်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသောခံရ Helene Hanff သူ့ကိုမျှော်လင့်ထားဘူး, ငါ့ခေါ်ဆိုခမှတုံ့ပြန်နှင့်သူ့တိုက်ခန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတျချေါ.
ကျနော်တို့မှာမြေအောက်ရထားထွက်ခွာသွားအဖြစ်ကိုလံဘတ်စနေ့ချီတက်ပွဲအပြည့်အဝလွှဲ၌ရှိ၏ 72 လမ်းကြိမ်မြောက်တနေ့နှင့်ကျွန်တော်ရှုပ်ပွနေအောင်စတူဒီယိုမစ္စ Hanff ဦးတည်ခဲ့သည်, l'အထက်အရှေ့ဘေးထွက်, သူမတစ်ဦးတည်းနေထိုင်ခဲ့ဘယ်မှာ.
သူမသည်ငါ့အမိအိန္ဒိယကသူ့စာအုပ်တွေဖတ်ပါနှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုချင်ခဲ့ကွောငျးမယုံထုတ်ဖော်ပြောဆို. သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်နှင့်မစ္စ Hanff သည်သူ၏စာအုပ်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်သူတို့မိတ္တူလက်မှတ်ရေးထိုးနေစဉ်, ကျွန်မသူ့ကိုနည်းနည်းအာကာသထားရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ပြောင်းလဲအိပ်ရာဆိုဖာ, ဆေးလိပ်ပြာခွက် emptying, အဝတ်ခေါက်နဲ့ကော်ဖီခွက်အဘို့အသွား. .
မိမိအသေးငယ်တဲ့မီးဖိုချောင်များ၏ရှေ့မှောက်၌မြို့ရိုးပေါ်မှာ, အန်း Bancroft နှင့် Anthony Hopkins ကိုစေ့စေ့ 84 "၏ရုပ်ရှင်ဗားရှင်းများအတွက်ပိုစတာ watched, Charing Cross Road ».
မစ္စ Hanff ခြောက်လအကြာမှာကွယ်လွန်သွား, ဧပြီလ 1997.
New York ကယနေ့တွင်ဖို့ရက်အပေါ်ထုတ်ဝေ6နာရီ. စာရင်း – ဒီမှာ အီးမေးလ်ကနေတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိရန်. သင်တို့သည်လည်းပေါ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည် nytoday.com .
ကျနော်တို့ဒီနေ့နယူးယောက်မြို့ format နဲ့အတူစမ်းသပ်. အဘယ်အရာကိုသင်ပိုမိုတွေ့မြင်ချင်ပါတယ် (ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း)? မှတ်ချက် post သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့: nytoday@nytimes.com .
Gumdrops CBD စိန့် Valentin
တစ်ဦးက potted စျေးကွက်ပိတ်ကာလအတွင်းဖက်ဒရယ်န်ထမ်းအခမဲ့မြက်ကိုထောက်ပံ့ပေး